Sawirro: Maxaa looga hadlay kulankii Muqdisho ku dhexmaray Kheyre iyo beesha caalamka? - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Maxaa looga hadlay kulankii Muqdisho ku dhexmaray Kheyre iyo beesha caalamka?
Sawirro: Maxaa looga hadlay kulankii Muqdisho ku dhexmaray Kheyre iyo beesha caalamka?
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada JFS Xasan Cai Khayre ayaa maanta kulan gaar ah la qaatay Wakiillada Beesha Caalamka, kulanka oo ujeedadiisu ahaa inuu warbixin ka siiyo xaaladda dalka, isla markaana la sii xoojiyo iskaashiga dhinacyada badan ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo dalalka iyo Hay’adaha uu la kulmay Safiiradooda.
Ra’iisul Wasaaraha waxaa ku wehliyey kulanka Wasiirada Maaliyada, Qorsheynta, Difaaca, Amniga iyo Wasiiru Dowlaha Xafiiska RW.
Nuqulka hadalkiisa ayaa waxaa kamid ahaa ”Qof kasta oo idiinka mid ah wuu og-yahay Horumarka ballaaran ee aan dhowrkii bilood ee la soo dhaafay sameyney , waxaan joognaa waqtigii aan ka gudbi laheyn hadal kaliya una gudbi lahayn ficil iyo Waxqabad. Waana sababta aan halkan isagu nimid si aan uga hadalno kobcinta dhaqaalaha iyo horumarka la gaaray sidii horey loogu sii wadi lahaa”. ayuu yiri R/Wasaare Khayre.